Beesha Caalamka Oo Codsi U Dirtay Dowladda Somaliya - Awdinle Online
Beesha Caalamka Oo Codsi U Dirtay Dowladda Somaliya
November 19, 2019 (Awdinle Online) – Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ay dowladda Soomaaliya ka dalbatay inay goobjoog oo kaliya ka noqoto doorashada ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug.
Xubnaha beesha caalamka ee ka hadlay arintaan ayaa dowladda federaalka ka codsaday in doorashada Galmudug aysan noqon tu la mid ah kuwii horay uga dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug.
Dhanka kale, waxay balanqaadeen in iyagu ay bixin doonan wax kasta oo dhaqaale ah oo ku baxaya doorashadda.
Doorashadda Galmudug ayaa ah mid aad isha loogu hayo isla markaana daneynayaan mucaaradka iyo Xukuumadda.
Previous articleXisbi weynihii dowladda dhexe oo dhawan lagu dhawaaqi doono
Next articleAskar Ku Sugneyd Saldhig Ciidan Oo Laayay